China Round Vibrating Screen Kugadzira uye Fekitori | Xinrui
Waste Plastic Pulverizer 75kw mota Kit
Plastiki Pulverizer 55kw Motor Kit
Kuvaka Plate Pulverizer Model 80
PVC Knife Dish yePulverizer
Vibrating skrini ndiko kushandiswa kwe vibrator kunakidzwa kunoitwa neanodzosera kudengenyeka uye basa. Iyo yekumusoro yakatenderera uremu hweiyo vibrator inoita kuti iyo skrini pamusoro ibudise ndege cyclotron vibration, nepo yakaderera rotary huremu inoita kuti iyo skrini yepamusoro ibudise conical rotary vibration, uye iyo yakasanganiswa mhedzisiro inoita iyo skrini yepamusoro kuburitsa mukomboni kutenderera vibration. Iyo yekudengenyeka trajectory ndeye yakaoma spatial curve.
Iyo Inoshanda Musimboti
Vibrating skrini ndiko kushandiswa kwe vibrator kunakidzwa kunoitwa neanodzosera kudengenyeka uye basa. Iyo yekumusoro yakatenderera uremu hweiyo vibrator inoita kuti iyo skrini pamusoro ibudise ndege cyclotron vibration, nepo yakaderera rotary huremu inoita kuti iyo skrini yepamusoro ibudise conical rotary vibration, uye iyo yakasanganiswa mhedzisiro inoita iyo skrini yepamusoro kuburitsa mukomboni kutenderera vibration. Iyo yekudengenyeka trajectory ndeye yakaoma spatial curve. Iko curve inoratidzirwa sedenderedzwa pane yakatenderera ndege uye ellipse pane yakatwasuka ndege. Iko kukura kunogona kuchinjwa nekugadzirisa simba rekusimudzira kumusoro uye pasi kutenderera inorema sando. Nekugadzirisa nzvimbo yechikamu Angle yekumusoro neyezasi sando, iyo curve chimiro cheyekufamba trajectory yeiyo skrini yepamusoro uye inofamba trajectory yezvinhu zviri pachiratidziro pamusoro zvinogona kuchinjwa.
Denderedzwa rinodedera skrini rudzi rwehukuru hwekuyera kuchenesa chidzitiro, icho chinonyanya kushandiswa kuongorora marasha, limestone, mavhu, simbi kana isiri-simbi ore nezvimwe zvinhu, zvinoenderana nekuchengetedza kwevashandi. Iko hakuna chinhu chisina basa nezve kuchengetedzeka, izvo zvinoda kuti gadziriso yeraundi yakatetepa ichidzikamisa kuti ive yakamisikidzwa uye yakajairwa, mhando yechigadzirwa inofanirwa kuve inokodzera uye inosangana nemitemo yenyika, uye denderedzwa rinotetemedza skrini iri kushanda Tinofanira kucherechedza kana paine shanduko isina kujairika mumuchina wechidzitiro kubva pakunzwa nekuona, sekunge paine kurira kusingaenzanisike, kunyangwe izvo zvinhu zvobva zvatsauka, kunyangwe iro skrini rakasununguka uye rakavharika, kunyangwe iko kushanda kweiyo vibration inonakidza uye skrini bhokisi haina kujairika, uye tarisa kutakura tembiricha panguva imwe chete.
Denderedzwa rinodedera skrini iri mhando yepamusoro-chaiyo poda yekuongorora michina, ruzha rwayo rwakaderera, kushanda kwakanyanya, maminetsi matatu-mashanu chete kutsiva chinovhara, chimiro chakavharwa zvizere. Inokodzera kuongororwa kwepurasitiki yeupfu zvinhu filtration.
Swing sieve ine yakatwasuka mota senge vibration sosi, iwo maviri magumo emota akaisa eccentric uremu uye mota kutenderera kuita yakatwasuka, yakatwasuka, inorerekera mativi-matatu mafambiro, ndokuzoendeswa pamusoro pechiso. Chinja iyo yekumusoro neyezasi chikamu angles kuti uchinje iyo trajectory yeiyo skrini pamusoro.
Bhenefiti Ye Circular Vibrating Screen
Iyo denderedzwa inozungunusa skrini iri mhando nyowani yekudengenyeka skrini ine akawanda matete uye akakwana kushanda;
Kunetsekana kushungurudzika kwekutora chitubu kunoshandiswa kudzikisira ruzha;
Iyo inotora yakakurisa inorema inobata nehombe hombe gasi, yakaderera yekushanda tembiricha uye hwakareba hupenyu hwebasa
Chimiro cheiyo skrini bhokisi uye furemu ine simba rakakwira inogamuchirwa;
Pfekai inoomarara yerabha skrini inogona kupihwa kuti zviite zvinhu zvakanamirwa muburi rekrini kusvetuka kunze uye kudzivirira gomba rekona kubva pakuvhara;
Iyo ine zvakanakira hombe yekugadzirisa kugona, yakasimba yezvisikwa zvezvikamu uye nyore kugadzirisa.
Pashure: PVC Knife Dish yePulverizer
Zvadaro: Yakasimba Magnetic Conveyor Bhandi